Miady ho an’ny fahalalahana maneho hevitra ireo zanakavavin’ilay mpikatroka ny zon’olombelona Kambodziana nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2018 3:58 GMT
Ny zanakavavin'i Kem Sokha, Kem Monovithya, miresaka amin'ny vahoaka
Sary natolotr'i Warren Anderson, UCIC
Ny 31 Desambra 2005 dia nosamborina i Kem Sohka, talen'ny Foibe Kambodziana ho an'ny Zon'olombelona , sy Yeng Virak, lehiben'ny Foiben'ny Vondrom-piarahamonina ho an'ny Fanabeazana Ara-pitsarana, noho izy ireo voalaza fa nanala-baraka ny governemanta tamin'ny sora-baventy nasehony nandritra ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona. Olona miisa dimy, na io mpanao gazety, na sendika, na mpikatroka mafàna fo mpiaro ny zon'olombelona malaza no nosamborina noho ny fitoriana napetraky ny governemanta na ny lehibeny . Miresaka mivantana ny fanehoan-kevitra manoloana ny Praiminisitra Hun Sen ao amin'ny Antokom-bahoaka Kambodziana (CPP), ary ny tsikera momba ny olan'ny sisintaniny saropady manoloana an'i Vietnam mpifanolo-bodirindrina aminy ny ankamaroan'izany.
Ireo mpitsikera, anisan'izany i Etazonia , ny Firenena Mikambana , ny Banky Iraisam-pirenena ary ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona iraisam-pirenena, dia nanameloka ny hetsiky ny governemanta ary nampiseho an'i Kambodza, eo ambany fitondran'i Hun Sen ho lasa mpanao didy jadona kokoa fa tsy mampihatra ny demaokrasia.
Nandeha fiaramanidina nankany Etazonia ny zanakavavin'i Kem hianatra raha nentina tany amin'ny fonjan'i Prey Sar ny rainy. Tsy nahalala ny fisamborana izy ireo raha tsy tonga tany Washington, DC izay hanombohan'ny Samathida ilay zandriny ny fianarany ny 17 Janoary.
Nisy ny fiaretan-tory niaraka tamin'ny labozia natao teo anoloan'ny Trano Fotsy izay nokarakarain'ny fikambanana elo, ny Vaomiera Iraisampirenena ho an'ny Fiombonan'ny Kambodziana (UCIC), izay nahitana vondrona am-pielezana Kambodziana maro. Iray tamin'ireo mpandahateny nasongadina i Monovithya Kem ary nanome vaovao ny mpihaino momba ny toe-draharahan'ny rainy tany am-ponja. Nanome fanamarihana ihany koa ny mpiara-mitantana ny Vaomiera Iraisampirenena ho an'ny Fiombonan'ny Kambodziana (UCIC), Suykry Path avy any Minnesota sy ny Venerable Monk Rithipol avy any Massachusetts.
“Mampahery ahy ny ezaka nataon'ireo Kambodziana tany Amerika sy manerana izao tontolo izao”, hoy i Monovithya Kem. “Mino aho fa tsy hohadinoina ary tsy adino ny dadanay sy ny tolona ataony ho amin'ny demaokrasia any Kambodza.”
Natao tany amin'ireo Tempoly Bodista lehibe manerana an'i Amerika ny andro Fankalazana ny Hatsaram-panahy (“Bon Psay Meta” any Kambodza). Niantso ny zanakavavin'i Kem Sokha, Samathida an-telefaonina aho, izay nilaza tamiko fa nanohina azy ny fanohanana noraisiny sy ny rahavaviny avy amin'ny Amerikana Kambodziana sy ny hafa.
Nanohy tamin'ny filazana izy fa tena diso ny fisamborana ny rainy. “Manana atidoha ny vahoaka Kambodziana, mieritreritra izy ireo ary mikasa ny hilaza ny ao an-tsainy. Kanefa gadraina ianao raha tsy tian'ny governemanta izay lazainao, Tapenam-bava izahay ao amin'ny firenenay.” Nandrisika ireo izay miahy ny fahalalaham-pitenenana izy hanery ny governemanta Kambodziana hamotsotra ny rainy sy ireo rehetra nogadraina. “Aza mandao ry Kambodza.”
Nihaona tamin'ireo Depiote sy Loholona ao Washington, DC izy mirahavavy mba hanao antso manokana ary hamoaka taratasy fanohanana avy amin'ireo ONG Kambodziana, Amerikana Kambodziana, ary ny hafa.
Mety hanomboka bilaogy izy ireo hanohizana ny fitantarany sy hiangavy amin'ny hamotsorana ny rainy ary hitaky ny fahalalaham-pitenenana any Kambodza. Nisy fiantraikany goavana teo amin'ny tontolon'ny bilaogy Kambodziana anefa ny hetsika farany nataon'ny governemanta. Tsy naneho ny heviny momba ity lohahevitra ity ny bilaogera ao amin'ny firenena.